सरकारलाई अहिले मजदुर चाहिँदैन नि - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
सरकारलाई अहिले मजदुर चाहिँदैन नि
२०७७ भाद्र २८, आईतवार १२:१२:००
काठमाडाैँ-सरकारलाई अहिले मजदुर आवश्यक छैन । यो चुनावको समय पनि होइन । कोरोना कोभिड–१९ को त्रासको सुरुमा सरकारले विदेशमा रोजगारी गुमाएर आएका मजदुरलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो ।
उनीहरूलाई देशभित्र स्वरोजगार बन्न ॠण दिने पनि भनेको थियो । त्यो कुरा अहिले कता हरायो, पत्तो छैन । सरकारी संयन्त्रबाट सबैभन्दा बेवास्ता देशभित्र काम गरेर जीवन चलाउनेहरू परेका छन् ।
नेपालमा आफ्नो जमिनको उब्जनीले खान नपुग्ने, अन्य रोजगारी नभएका र चरम गरिबीका कारण पढ्न नपाएका कामको खोजीमा भारतमा जानेहरू सरकारको चासोमा परेनन् ।
सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई काम नगरे पनि प्रत्येक महिना तलब दिइरहेको छ तर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुररू तथा असंगठित क्षेत्रमा श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मजदुरहरू सरकारको चासोमा परेका छैनन् ।
कोभिड–१९ सुरु भएपछि भारतमा मजदुरी गर्नेहरू मरे पनि घरमै मर्छौं, परिवारसँग भेट गर्छौं भन्दै सयौं किलोमिटर हिँड्दै लाखौंको संख्यामा नेपाल भित्रिए । देशभित्रका मजदुरहरू पनि देशको एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म पैदलै पुगे ।
उनीहरूका लागि भोक र प्यास मेट्ने केही भएन, सरकारको कुनै सहयोग भएन । सुत्केरी, वृद्धवृद्धा तथा साना बालबालिका ठूलो आपत–विपतमा परे । सरकारी निकायले उनीहरू मान्छे हुन् जस्तो पनि गरेनन् ।
सरकारले महामारी सुरु भएर देशलाई बन्दाबन्दीमा लगेपछि जथाभावी राहत बाँड्यो । कर्मचारी र नेतासमक्ष पहुँच पुग्नेले राहत पाए । राहत वितरणमा सरकारले ठूलै धनराशि खर्च गरेको तथ्यांक छ ।
वास्तबिक मजदुरलाई भने सरकारले देखेन, चिनेन । अहिले चुनावको बेला नभएकाले उनीहरू बेवास्तामा परेको स्पष्ट छ ।
देश बन्दाबन्दीको भूमरीमा परिरहँदा सरकारले नदेख्ने मजदुरको सबै कुरा गुमेको छ । जागिर गुम्यो, काम गरेर खाने पेसा गुम्यो, स्वास्थ्य गुम्ने अवस्थामा पुग्यो । उनीहरूको जीवन विभिन्न संघसंस्थाले बाँड्ने खानामा चलेको छ ।
सहयोगी संस्थाहरू र मनकारी युवाहरूको सक्रियतामा देशका विभिन्न क्षेत्रमा खानेकुरा बाँडिंदा मजदुरहरूको ज्यान बचेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोही पनि भोको बस्नुपर्ने छैन भनिरहेका छन् । संविधानमा पनि खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ तर कार्यान्वयन गर्ने सरकारले नै मजदुर नचिने पछि कसको के लाग्यो ?
नेकपाले आफूलाई मजदुरको पार्टी भन्दै आएको छ । सशक्त मजदुर संगठन बनाएर राजनीति गरिरहेको छ । सो संगठनले आफूलाई मजदुरको हित गर्ने मसिहा दाबी गर्दै आएको छ तर विपन्न मजदुरको जीवनस्तर झन्–झन् गिर्दै गएको छ ।
राजनीतिक रूपमा बेइमानी, सामाजिक रूपमा विभेद, हेपाइ सरकारबाट त भएको छ नै अरू राजनीतिक दलका मजदुर संगठन पनि अहिले विपन्न मजदुरको भरोसा बन्न सकेनन् ।
विपन्नताकै कारण नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मजदुरहरू कारोना महामारीको आगो दन्किरहँदा पुनः मजदुरी गर्न भारत जान ओइरो लागिरहेका छन् । सरकारले किन यस्तो बेवास्ता गरेको होला ?
सरकार सञ्चालक दल नेकपा सत्ता जोगाउने र फाल्ने खेलमा रुमल्लिरहेको छ । त्यसमा मजदुरको कुनै काम छैन । अहिले चुनाव पनि आएको छैन, यस्तो अवस्थामा मजदुरको के काम, काम हुँदा दिन आउला नि ।
फ्रान्स र बेलायतमा तीव्र रूपमा बढ्दै कोरोना संक्रमण, विश्वमा...
कोरोनाका कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनको संख्या ९ लाख ९१ हजार बढ...
भारत राजस्थानको सडकमा निस्किएका प्रदर्शनकारी उत्रिए आगजनी र...
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको तेह्रौ वार्षिक साधारण सभा कात्तिक ३...
प्रभु बैंकको नेतृत्वमा कर्मचारी संचय कोष र कृषि विकास बैंकले...
फ्रान्स र बेलायतमा तीव्र रूपमा बढ्दै कोरोना संक्रम...
कोरोनाका कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनको संख्या ९ लाख...
भारत राजस्थानको सडकमा निस्किएका प्रदर्शनकारी उत्रि...
मुक्तिनाथ विकास बैंकले अष्ट्रेलियाबाट पनि रेमिट भि...
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको तेह्रौ वार्षिक साधारण सभा...
प्रभु बैंकको नेतृत्वमा कर्मचारी संचय कोष र कृषि वि...
झलनाथ खनाललाई प्रश्न-: गृह जिल्लाको नगदेबाली कुहिदै छन तप...